”ပန္ကာဖြင့္အိပ္တတ္သူမ်ား ” သတိထားၾကပါ….. •
”ပန္ကာဖြင့္အိပ္တတ္သူမ်ား ” သတိထားၾကပါ…..
27/11/2019 Yan Naing ဗဟုသုတ 0
ပန္ကာ အေသထားၿပီး အိပ္ရာကေန ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ေသဆုံးသြားေသာလူငယ္
ငယ္တယ္ ႀကီးတယ္ ရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး ….ပန္ကာ ကို သတိထားၾကပါ ……
ပန္ကာ ကို ေခါင္းဘက္ကေန အေသထားၿပီး အိပ္ရာကေန ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ျပန္မႏိုးလာေတာ့ပါဘူး …..
ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ပန္ကာကို ညဖက္ အၾကာႀကီး ဖြင့္မအိပ္က်ပါနဲ႔ …..
မေသေတာင္ အေၾကာေတြတင္းပီး က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္….
ပန္ကာနဲ႔ အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား……
ပန္ကာနဲ႔ အိပ္စက္တာဟာဆုိရင္ေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။
အိပ္စက္သူရဲ႕ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားေသာ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕က လက္ကပ္ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ေက်ာေအာင့္ျခင္း၊ အဆုတ္အေအးမိျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ ျခင္း၊ ဇက္ခိုင္ျခင္း၊ ေျခေထာက္မ်ား ေလးျခင္းစသည္ျဖင့္ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္ပါ ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရေတာ့ ကေလးအိပ္ခန္းမွာ ပန္ကာဖြင့္ထားရင္ ကေလးေတြဟာ ၇၀% အထိကို က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ ျမင့္တက္ေစပါတယ္။
ဒီလုိက်န္းမာေရးျပႆနာေတြဟာ ေသဆံုးျခင္းတဲ့အထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေန႔အခ်ိန္ ပန္ကာမွာ ဖုန္ေတြ ကပ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ ပန္ကာကို ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဖုန္ကပ္ေနတဲ့ပန္ကာက ေလေတြဟာ အိပ္စက္သူ၏ ဦးေခါင္းခြံတြင္ ႏွာေခါင္းေပါက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ ဦးေခါင္းအတြင္းေလလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ပန္ကာေတြကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးသင့္ပါတယ္။
”ပန်ကာဖွင့်အိပ်တတ်သူများ ” သတိထားကြပါ…..
ပန်ကာ အသေထားပြီး အိပ်ရာကနေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သေဆုံးသွားသောလူငယ်
ငယ်တယ် ကြီးတယ် ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ….ပန်ကာ ကို သတိထားကြပါ ……
ပန်ကာ ကို ခေါင်းဘက်ကနေ အသေထားပြီး အိပ်ရာကနေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး ပြန်မနိုးလာတော့ပါဘူး …..
ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ပန်ကာကို ညဖက် အကြာကြီး ဖွင့်မအိပ်ကျပါနဲ့ …..
မသေတောင် အကြောတွေတင်းပီး ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်….
ပန်ကာနဲ့ အိပ်စက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ……
ပန်ကာနဲ့ အိပ်စက်တာဟာဆိုရင်တော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။
အိပ်စက်သူရဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသော ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
တစ်ချို့က လက်ကပ်ခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ကျောအောင့်ခြင်း၊ အဆုတ်အအေးမိခြင်း၊ ခေါင်းကိုက် ခြင်း၊ ဇက်ခိုင်ခြင်း၊ ခြေထောက်များ လေးခြင်းစသည်ဖြင့် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်ပါ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
(၁) အိပ်စက်ရာမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်
ပန်ကာကနေ ထွက်တဲ့အသံကြောင့် အိပ်ချိန်မှာ နှောင့်ယှက်မှုအသေးအမွှားကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ပန်ကာအသေးစားတွေကတော့ နှောင့်ယှက် မှုနည်းပေမယ့် မျက်နှာကျက် ပန်ကာမျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ချိန်မှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
(၂) ရုတ်တရက် ကလေးတွေသေဆုံးနိုင်တယ်
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရတော့ ကလေးအိပ်ခန်းမှာ ပန်ကာဖွင့်ထားရင် ကလေးတွေဟာ ၇၀% အထိကို ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု မြင့်တက်စေပါတယ်။
ဒီလိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဟာ သေဆုံးခြင်းတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပန်ကာဟာ လေကို ခြောက်သွေ့စေနိုင်တာကြောင့် အိပ်စက်တဲ့သူတွေရဲ့ ပါးစပ်လေပြွန်ကို မြန်မြန်ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပါးစပ်ခြောက်ရင်တော့ ရေခဏ ၊ ခဏ ထသောက်နေရတာကြောင့် အိပ်ရေးပျက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄)ဦးခေါင်းခွံအတွင်းရှိ လေလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ခြင်း
နေ့အချိန် ပန်ကာမှာ ဖုန်တွေ ကပ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ပန်ကာကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဖုန်ကပ်နေတဲ့ပန်ကာက လေတွေဟာ အိပ်စက်သူ၏ ဦးခေါင်းခွံတွင် နှာခေါင်းပေါက်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ဦးခေါင်းအတွင်းလေလမ်းကြောင်းကို ပိတ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပန်ကာတွေကို ပုံမှန်ဆေးကြောပေးသင့်ပါတယ်။
( ၇ ) ရက္ သားသမီးမ်ား၏ ဆန္းၾကယ္တဲ့ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ေျချဖတ္ရမည့္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ေသာ လူနာေတာင္ေကာင္းသြားတယ္ဆိုတဲ့ မီးကြင္းဂမုန္း အရွည္မ်ိဳး ….
This Year : 90012
Total Hits : 1248291